Isofthiwe evelele – Ikhasi 7 – Windows – Vessoft
WindowsIsofthiwe evelele – Ikhasi 7
I-BlueStacks App Player – i-emulator yohlelo lokusebenza lwe-Android. Isoftware iqinisekisa ukudlalwa kwekhwalithi ephezulu yezinhlelo zokusebenza ze-Android nesoftware.
Ithuluzi ukuba kwenziwe amakhophi eziphephile amafayela phakathi kwekhompyutha yakho kanye amaseva. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlele amafayela umbhalo zendawo kanye akude.
Le software yenzelwe ukuhlela, ukudala, ukulungisa nokuvumelanisa imibhalo engezansi kusuka kuvidiyo. Isofthiwe isekela izinhlobo eziningi zemibhalo engezansi ngezilimi ezahlukene.
I-HandBrake – ithuluzi lokusebenzisana namafayela wevidiyo futhi uwaguqule ngezindlela ezahlukahlukene. Isoftware isebenza ngemibhalo engezansi futhi ikuvumela ukuthi usebenzise izihlungi noma ama-codecs lapho uguqula.
I-Ashampoo Burning Studio MAHHALA – ithuluzi lokusebenza ngama-discs amafomethi ahlukile. Isoftware yeseka ukwenziwa kwesipele nokubuyisa idatha elahlekile.
I-MediaMonkey – umphathi wezincwadi we-multimedia onesidlali esakhelwe ngaphakathi kanye nezinhlobonhlobo zezici zokuhlela amafayela omculo nevidiyo.
Umsizi Wokuhlukaniswa kwe-AOMEI – ithuluzi lokuphatha ukwahlukanisa ama-hard disk. Isoftware ifaka amathuluzi wokusebenza ngama-disks futhi ikuvumela ukuthi wakhe ama-disc a-bootable.
The popular iklayenti sesifufula ukulanda futhi wabelane amafayela kwi-inthanethi. Isofthiwe ine imisebenzi ewusizo futhi ikuvumela ukuba ukuxhuma anezele.
I-Inkscape – umhleli wesithombe onesethi ebanzi yokusebenza. Isoftware isekela umsebenzi ngamaphrojekthi alula noma ayinkimbinkimbi futhi inika amandla wokuwusindisa ngezindlela ezahlukahlukene.
I imvelo nokuthuthukiswa software nge support for popular izilimi inhlelo. Isofthiwe iqukethe iqoqo imisebenzi ewusizo ukudala izicelo.
I-Baidu Browser – isiphequluli sewebhu kusuka kunjiniyela odumile waseChina waseBaidu. Isoftware inezici ezimbalwa ezilusizo zokuhlala ukuhlala ntofontofo kwinethiwekhi yomhlaba.
Enye yezinto emulators eziholayo PlayStation game Portable console. Isofthiwe isekela imidlalo eminingi futhi service nokuphathwa PlayStation Network.
Iphakethe Umshayeli ukuqinisekisa ukudlala elungile imifudlana audio. Isofthiwe okusezingeni bandwidth imvamisa futhi isekela uxhumano kumadivaysi ehlukahlukene audio.
I-DivX – iphakheji isethwe ukusebenza ngama-codecs namafayela wevidiyo. Isoftware isebenzisa ubuchwepheshe ukuphequlula amafayela emidiya ngeleveli ephezulu yokucindezelwa.
I-Media Player Classic Home Cinema – isidlali semidiya esidumile ngokuxhaswa kwezilungiselelo ezihlukile zokudlala ifayela eliphezulu. Futhi isoftware inika amandla ukubuka amafayela angenalo umthwalo ngokuphelele noma owonakele.
Ithuluzi elinamandla layout kwemibhalo ezingeni okhokhelwayo. Isofthiwe ifakwe amathuluzi ekhethekile eziphambili idokhumenti processing.
Isiphequluli ukuthi ine a esakhelwe amaklayenti sesifufula, amasevisi ekhethekile Torch kanye nesethi izici ukwabelana lula amafayela, thwebula okuqukethwe kwabezindaba.